सेतो भूत | मझेरी डट कम
kbs — Tue, 11/25/2008 - 21:45
विनय कुमार कसजु
उसले बारीको डिलतिर हेर्यो । अचम्म ! एक जना पुड्को मानिसले कान्लाको ढुंगामाथि केही कुरा फोर्न लागेको उसले देख्यो । कान्छाले जीवनमा त्यति सानो मानिस देखेको थिएन । त्यो मानिस खरायोजत्रो थियो । उसले सेतो लुगा लाएको थियो । पहिले त उसलाई डर लाग्यो । तर अचानक उसले आफ्नो बजैले सुनाएको सेतो भूतको कथा सम्झ्यो ।
सेतोभूतलाई कब्जामा लिन पाए उसले गाडेको धन भेट्टाइदिन्छ भन्ने कान्छाले सुनेको थियो । त्यो सानो मानिस पक्कै पनि सेतोभूत हुनर्ुपर्छ भन्ने उसले ठान्यो । जीवनभरि अर्काको घरमा हलो जोतेर बसेको कान्छाले अचानक धनी हुने उपाय देख्यो । उसले त्यो सेतो भूतलाई समात्ने बिचार गर्यो ।
सेतोभूत एक सुरले ढुंगामाथि ओखर फोरिरहेको थियो । कान्छा चाल मारेर उसको नजिक आएको उसले पत्तै पाएन । कान्छाले अचानक त्यो भूतलाई च्याप्प समात्यो र भाग्ला भनेर बेस्सरी अँठ्यायो ।
"लौ तैँले पैसा कहाँ गाडेको छस् - भन् । नभनेसम्म तँलाई छाडदिन ।" कान्छाले अरू कुरामा नअल्मलिई सेतो भूतलाई भन्यो ।
भूतले नरम हुँदै भन्यो, "पहिले मलाई सास फर्ेन त देऊ । म मरेँ भने तिमीलाई पैसाको ध्याम्पो कसले देखउँछ -"
"हामी सेतो भूतले एकपल्ट बोले पछि बोल्यो बोल्यो । हामीले मानिसले जस्तो कुरा फर्ेन जान्दैनौँ । पहिले मलाई भुइँमा राखिदेऊ अनि पैसा गाडेको ठाउँ देखाइदिउँला ।" भूतको कुरामाथि कान्छालाई विश्वास लाग्यो ।
उनीहरु बनको माझमा पुगे । त्यहाँ पुगेपछि सेतोभूतले भन्यो, "लौ हामी धन गाडेको ठाउँमा आइपुग्यौँ ।" उसले एउटा रुखको फेँदतिर औँल्याउँदै भन्यो, "लौ यही रुखको मुन्तिर झण्डै पाँचहात तल सुनका मोहरले भरिएको एउटा ध्यम्पो छ । तिमी आफैले खनेर ध्याम्पो झिक्नर्ुपर्छ ।"
"ठिक कुरा गर्यौ । मैले औजार लिएर नआएसम्म तिमी यहीँ बसिराख है त ।" कान्छाले भन्यो ।
"त्रि्रो कुरा त ठिक हो । तर म फेरि फर्केर आउँदा यही ठाउँ र यही रुख कसरी चिन्ने -" कान्छाले सोध्यो ।
भूतले हाँस्दै भन्यो, "यति सानो कामको लागि पनि म यहाँ बसिराख्नु पर्छ र -"
"कसरी थाहा पाउने त -" कान्छाले उत्सुक हुँदै सोध्यो ।
भूतले भन्यो, "तिमीले लाएको टोपी यो रुखको टुप्पामा राखेर जाऊ । र्फकँदा टाढैबाट रुख चिनिहाल्छौ नि ।"
रुखबाट ओर्लेपछि उसले सेतोभूतलाई धन्यवाद दियो । खन्ने औजार लिन ऊ हतारिँदै घरतिर लाग्यो ।
तर अचम्म ! उसले बनका सबै रुखका टुप्पामा एकएक वटा ढाकाटोपी झुण्डिएको देख्यो । असर्फीको ध्याम्पो गाडेको रुख अब कसरी चिन्ने - कान्छा निराश भयो । "बदमास भूतले मलाई झुक्यायो" भन्दै ऊ थुचुक्क रुखको फेँदमा बस्यो । भूतलाई नछाडेको भए आफूले चिताए जति धनसम्पत्ति उसले दिन्थ्यो होला भनेर कान्छा पछुतायो ।
(प्राचिन आइरिस लोककथाको आधारमा)
अतिथि: Gaurav Pokharel, Jhapa (not verified) — Fri, 04/08/2016 - 05:57
Very interesting story !!! :)
Sanchai ko ketaketi katha
nandalal.acharya — Fri, 04/15/2016 - 06:50
Lok katha padhne saubhagyaka lagi KASAJU & MAJHERI lai dhanyabad !